जापान्ग्रेजी (जापानी र अंग्रेजी)का १० शब्द जुन थहा पाई राख्दा राम्रो | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > CULTURE > जापान्ग्रेजी (जापानी र अंग्रेजी)का १० शब्द जुन थहा पाई राख्दा राम्रो
हामी जति आफ्नो भाषा बोल्दा आनिमे, पोकेमोन, सुशी, जस्ता ठेट जापानी शब्द प्रयोग गर्दछौ, जापानीहरु पनि अंग्रेजी भाषाका शब्दहरु सापट लिएर अनेकौ तरिकाले प्रयोग गर्दछन। हामी नेपालीहरु पनि त अंग्रेजी भाषालाई अनेक तबरले बिगारेर प्रयोग गर्दछौ नि हैन र ? अंग्रेजी भाषा बिस्वब्यापी भएको हुनाले पनि यो भाषाको शब्दहरु अरु भाषामा प्रयोग हुनु अनौठो कुरा भने हैन।
तर जापानी उच्चारण संग अंग्रेजी शब्दहरु नमिल्ने, र ति शब्दहरुको अभिव्यक्तिहरु जापानी द्वारा नौलो रुपमा प्रयोग गरिने हुनाले पनि हामी कहिले कहिँ भनेको कुरा नबुझ्न सक्छौ। यो जापान्ग्रेजीलाई जापानमा “वसेइ-एइगो” भनिन्छ जसको शाब्दिक अर्थ “जापानमा निर्मित अंग्रेजी” हो (वा मात्र भनौं, “केवल जापानमा बोलिने अंग्रेजी”!)। जापानमा आजकल “वसेइ-एइगो” सामान्य रुपमा प्रयोग भइरहेको छ, र यो जापनी भाषाकै अंश बनिसकेको छ। केही मूल जापानीवक्तालाई पनि यी शव्दहरूको उत्पत्ति ’bout सचेतता छैन। अझ चाखलाग्दो कुरा के छ भने, केही जापानी भाषीहरू यी शब्दहरू नै उचित अंग्रेजी हुन् भन्ने विश्वास गर्दछन् र विश्वभरि नै यसको अर्थ छ भन्ने सोच्दछन। यद्यपि, “वासेइ-एइगो” शब्दहरूको अंग्रेजी मूलबाट बिभिन्न भिन्न अर्थ हुन सक्दछ। आज हामि हजुरलाई यस्ता केहि रमाइला शब्द बताउनेछौ।
१. फ़ुराईदो पोटेटो
एक चोटी थहा पाए पछि हजुरलाई यो शब्द निकै सजिलो र अर्थ पर्नसक्दछ। मा मेक डोनाल्डमा फ्रेन्च फ्राई भनेको केहि पछि मात्र बुझेकि फ़्राईदो पोटेटो भनेको पनि फ़्राईड पोटेटो हो। जापानीहरु फ्रेन्च फ्राई भनेको त्यति बुझ्दैनन्।
सुकीन्सिपको अर्थ भनेको हात मिलाउनु, अंकमाल गर्नु, कडल गर्नु हो। यो शब्द रिलेसनसिप र स्किन जोडिएर बनेको हुनु पर्दछ। जापानी कल्चरमा छुन त्यति मन पराइदैन। नराम्रो लिने भन्दा पनि त्यसरी स्पेसल मानिसलाई मात्र छुने गरिन्छ। त्यहि भएर पनि जापानमा ग्रिट गरिदा निहुरिने गरिन्छ।
३. हाइ टच
हाइ टच सुरुमा सुन्दा मलाई किन यस्तो भनेको होला जस्तो लाग्दथ्यो। यसको अर्थ हाइ फाइब हो। मैले मेरो जापानी साथीलाई हाई फ़ाईब भन्दा उसले मलाई अच्चम्म तरिकाली हेरेको थियो। त्यहाँ बाट थहा पाए मैले यसलाई हाइ टच भनिन्छ भन्ने।
यो शब्दको अर्थ अंग्रेजीमा धेरै पहिलेनै हराई सकेको थियो। यो शब्द अंग्रेजीमा प्रयोग गर्यो भने अनर्थ पनि लाग्न सक्दछ। हामी यहाँ कुनै सेक्सुअल कन्सेंटको कुरा गर्दै छैनौ। जापानमा कोनसेनतो भनेको एलेक्त्रिक प्लग जोड्ने आउट्लेट हो। यसलाई धेरै पहिले अंग्रेजीमा कन्सेंत्रिक प्लग भनिन्थ्यो।
५. दोन माइ
यो शब्द साथिहरु बीच धेरै प्रयोग गरिन्छ। खेल कुदमा यदि हजुरले स्कोर गर्न सक्नु भएन भने तपाइको साथिले तपाइलाइ दोन माइ भन्न सक्छन। दोन माइको अंग्रेजी शब्द भनेको डन्ट माइण्ड हो। अथवा नेपालीमा भन्नु पर्दा चिन्ता नगर केहि हुन्न हो।
६. इआकोन् / कुरा
इआकोन भनेको इअर कन्डिसनर हो। कसै कसैले ए सी पनि भन्छन। जापानमा अंग्रेजी बाट सापट लिएको शब्द जति छोटो भयो त्यति राम्रो हो।
त्यसैगरी कुरा भनेको पनि ए सी नै हो।
स्टोभलाई जापानीमा सुतोबू भनिन्छ। अंग्रेजीमा वा नेपालीमा स्टोभ भनेको चुलो हो। जापानमा भने तेल हालेर चलाउने हिटर हो।
8. High-tension (haitenshon)
के तपाइँ हाइपर हुनु हुन्छ ? के तपाई सधै उत्तेजित महसुस गर्नु हुन्छ ? त्यसो भए हजुर हाई टेन्सन मानिस हुनु हुन्छ।
यो भनेको तपाई चिन्तित हुनु हुन्छ भनेको हैन यसको अर्थ तपाई निकै एक्साईटेड हुनु हुन्छ हो। टेन्सनको अंग्रेजी को अर्थले नझुक्किनु होस् है। हाइ टेन्सन भनेर कसैले तपाइलाई काममा भन्छन भने यो एक प्रकारको प्रसंशा हो।
9. Guts Pose (gattsu pozu)
यो शब्दको अर्थ निकै रमाइलो छ। हजुरले कहिले बिजेता जस्तो महसुस गर्नु हुन्छ ? जोसमा आएर हजुर “यस आई डिड” भन्नु भएको छ। हजुरले जापानमा त्यसो भए थहा नपाई गाचु पोज दिनु भएको छ। हजुरले आफ्नो अफिस वा स्कुलमा मानिसले यो पोज दिएको देख्न सक्नु हुनेछ।
10. Base-up (besuappu)
काममा सबै भन्दा तहको ईस्यु बनेर मिसले काम छोड्ने कारण भनेको थोरै तलब हुन सक्छ। धेरै जसो जापानी कम्पनिमा बेस अपको सिस्टम हुन्छ। अपको अर्थ बढ्नु हो। त्यसैले बेस अप को अर्थ हजुरको बेस स्यालरी बढ्नु हो।